वि.सं. २०७४ फाल्गुन ०२ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ फेब्रुवरी १४ तारिख,
फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, श्रवण नक्षत्र, मकर राशिको चन्द्रमा, व्यतिपात योग, विष्टि (भद्रा) र शकुनि करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : सहिद लखन थापा स्मृति दिवस,
आजको मूहुर्त : दैलो राख्ने, पुराणश्रवण,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : दर्शश्राद्ध, हलो तथा निशि बार्ने दिन, द्वापर युगादि, धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ, ,
भोलिको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), दैलो राख्ने, पुराणश्रवण,
राहु काल : दिउँसो १२:१९ देखि ०१:४२ सम्म
यमघण्ट : बिहान ०८:०९ देखि ०९:३२ सम्म
गुलिक काल : दिउँसो १०:५५ देखि १२:१९ सम्म
काल वारवेला : बिहान ०९:३२ देखि १०:५५ सम्म
लाभ वारवेला : बिहान ०६:४५ देखि ०८:०९ सम्म र साँझ ०४:२९ देखि ०७:२९ सम्म
आज चन्द्रमाको नकारात्मक ऊर्जा हाबी हुने भएकाले सरकारी काम र मुद्दामामिलाबाट लाभ लिन सकिने छैन । कर्मचारी वा शासक वर्गबाट धोका हुनसक्छ, सचेत हुनुपर्छ । आर्थिक लाभ नहुने कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । पढाइलेखाइमा समय दिन सकिंदैन । तपाईंको ईष्र्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ । आत्मबल र हिम्मतको प्रयोग गरेमा सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ । कामले धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । भूमि र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिने छ ।
काम रोकिनुका साथै मानसम्मानमा आघात पुग्न सक्छ । फाइदा कममात्र हुनेछ । आफ्ना कामजोरीमाथि टिप्पणी हुनसक्छ, सचेत रहनुहोला । बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले सहयोगीहरू टाढिन सक्छन् । अरूका काममा श्रम तथा बुद्धि खर्चनु पर्ला । आफ्ना काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ । कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ । बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा चिताएको काम रोकिन सक्छ । मिहिनेत र परिश्रम गर्न सकेमा बन्दव्यापारबाट मनग्ये फाइदा हुने देखिन्छ । पुरुषार्थी कामले प्रसिद्धि दिलाउन सक्छ । दिगो कामबाट मनग्य लाभ मिल्नेछ । सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्ने समय छ ।
चन्द्रमा सातौं भावमा भए पनि त्यत्ति अनुकूल दिन छैन । मनका इच्छा र आकाङ्क्षामा व्यवधान सिर्जना हुनेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहने छ, तर पनि मनमा निराशा र वैराग्यका भावना मँडारिन सक्छन् । पठनपाठनमा रुचि हुँदैन । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका त छ, तर मिहिनेत र परिश्रममा कमी आउनाले पूर्ण हुँदैन । यात्रामा नमज्जा हुनेछ । दाम्पत्य जीवन वा प्रेमसम्बन्धमा चिसोपन देखिने छ । मानसिक खिन्नता, चिन्ता/शङ्का र छटपटीले कष्ट हुनसक्छ । तर यथासम्भव समय र परिस्थितिलाई पर्गेलेर काम गर्न सके प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ ।
चन्द्रमाको प्रतिकूल फलले तत्काल ठूलो फाइदा लिन सकिने स्थिति बनाउँदैन् । त्यसैले जेगरे पनि आवेग र रिसरागलाई नियन्त्रणमा राखी धैर्य र लगनशीलताका साथमा काम गर्नुपर्छ । हतारको निर्णयले काम बिग्रन सक्छ, सजग रहनुहोला । मान्यजनको सुझाव अप्रिय लाग्नेछ । महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ । रोकिएका घरेलु कामकाज बिस्तारै बन्नेछन् । परिवारजनमा असमझदारी र मनमा अधैर्यपना बढ्नेछ । मातृधनको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिने छ ।
सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । मनग्ये आम्दानी हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधन जुट्न सक्छन् । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुनसक्छ, क्रियाशील रहनुहोला । रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ । प्रेमी/प्रेमिकाका बीचमा सुमधुरता र सामीप्यता प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
तेस्रोे भावमा रहेको चन्द्रमाले आज मिश्रित प्रभाव प्रदान गर्नेछ । खर्चको मात्रा बढ्नुका साथै परिस्थिति अन्योलमय बन्ने सम्भावना छ । मिहिनेत गर्दा अलि कम मूल्य प्राप्त हुनेछ । तापनि उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । स्थायीभन्दा अस्थायी पेसाबाट फाइदा हुने समय छ । आँटेका काम बीचमा अवरुद्ध बन्न सक्छन् । भएको आम्दानी र सञ्चित रकम समेत खर्च हुने सम्भावना छ । सोचेको फाइदा उठाउन अलि नसकिएला । नयाँ काम सुरु गर्न निकै खट्नु पर्ने हुन्छ । लगनशीलता र परिश्रमको अभावमा बन्दव्यापारमा मन्दी छाउने छ । परोपकारी र सामाजिक काममा समय प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
प्रयत्न गर्दा बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्ने दिन छ, तर आज मिश्रित प्रभाव प्राप्त हुने समय छ । अरूको विषयमा चासो राख्दा वादविवाद हुनसक्छ । धैर्यसाथ गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिने समय छ । बोलीमा मिठास र चाकरीको व्यवहार देखाउनु पर्छ । सहयोगीहरूले आशा गरेअनुरूप साथ दिन सक्दैनन् । मिहिनेत गरेबमोजिमको फाइदा लिन सकिंदैन । विगतको गल्ती र कमजोरीको कुरो उठ्न सक्छ । पठन–पाठनमा ध्यान दिने फुर्सद हुँदैन । तर रिसराग र बोलीवचनमा संयमता देखाउन सकेमा नचिताएको काम बन्न पनि सक्छ ।
राज्य स्थानको चन्द्रमा कमजोर छ । सोचेका काममा बिलम्ब हुनेछ । पारिवारिक समस्यामा ध्यान दिनु पर्नेछ । आम्दानीका मार्गमा अवरोध आउने छ । व्यावसायिक काममा समय दिन सकिंदैन । साझेदारी र सट्टापट्टामा बेफाइदा हुने भएकाले सतर्क रहनु पर्छ । प्रेमसम्बन्ध निरस हुनेछ । पुराना समस्या र काममा समय खर्च हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन । शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले सोचेको काममा विभिन्न बाधाव्यवधान आउने छन् । खानपानको टुङ्गो हुँदैन । दिनभरि चिन्ता, शङ्का र छटपटीले सताउने छ । तर आत्मविश्वासका साथमा काम गरेमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धीसमेत प्राप्त हुनेछ ।
आजको राशिफल बि.सं. २०७८ साल साउन ३२ गते सोमबार